သဲနဲ့တူတဲ့အချစ် | Skip to content
လူကလေး ရေကူးနေသည်၊ ဖေဖေမေမေ ကူပြီး ကူးပေးပါ →
Posted on June 23, 2012 by mamyathway	Number of View: 3686
သားအမိ နှစ်ယောက် ပင်လယ်ကမ်းခြေ တစ်နေရာမှာ အတူတူရှိနေကြတယ်။ သမီးဖြစ်သူက လက်ထပ်ခါနီး သတို့သမီးလေးပေါ့။ သမီးက မေမေ့ကို အခုလို မေးလိုက်တယ်။
“မေမေ..သမီးလက်ထပ်ပြီးရင် သမီးချစ်သူရဲ့ ချစ်ခြင်းမေထ္ထာကို သမီးလက်ထဲမှာ အမြဲထာဝရ ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်၊ သမီးကို သူ ခွဲခွာမသွားနိုင်အောင် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ နေသင့်သလဲ..ဟင် ..မေမေ ” လို့ မေးလိုက်တယ်။
သမီးရဲ့ မေးခွန်းကို ကြားတော့ မေမေက နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ ပြုံးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သဲပြင်ပေါ် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး သဲသောင်ခုံပေါ်က သဲမှုန်တွေကို လက်ဝါးတစ်ဖက်နဲ့ ထိုးကော်ယူလိုက်ပြီး လက်ခုပ်ထဲက သဲတွေကို တည်ငြိမ်အောင် သေချာဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ်လို့ သမီးဖြစ်သူရဲ့ မျက်နှာရှေ့မှာ ပြလိုက်တယ်။ သဲတွေက လက်ခုပ်ထဲမှာ အပြည့်အမောက် လျှံလို့။ သို့သော် တစ်မှုန်သော်မျှ လက်ကြားထဲက ယိုထွက်ကျသွားတာ၊ ဖိတ်စင်ကျသွားတာ မရှိဘူး။ သမီးဖြစ်သူက သူ့မေမေ လုပ်ဆောင်နေတာတွေကို ဇဝေဇ၀ါနဲ့ ကြည့်လို့။
မေမေက နောက်အားနေတဲ့ လက်တစ်ဘက်နဲ့ သဲတွေရှိနေတဲ့ လက်ခုပ်ပေါ်ကနေ ဖိပြီး ဆုတ်ချလိုက်တဲ့အခါ သဲမှုန်တွေက လက်ချောင်းတွေ ကြားကနေ ယိုထွက်ဖိတ်ကျ ကုန်တော့တယ်။ မေမေက သူ့ရဲ့ လက်ခုပ်တစ်ဘက်ကို ဖွင့်ဟပြလိုက်တော့ ဖိထားတဲ့အရှိန်နဲ့ နဂိုလက်ခုပ်ထဲမှာ မောက်နေတဲ့ သဲတွေဟာ လုံးမောက်တဲ့ ပုံပျောက်ပြီး ပြားချပ်ချပ်နဲ့ လှလှပပ မကျန်ရစ်ခဲ့တော့ဘူးပေါ့။ သမီးက မေမေ့ လက်ဝါးပြင်ပေါ်မှာ ကျန်ရစ်နေခဲ့တဲ့ သဲပွင့်တွေကို ကြည့်ပြီး မေမေ့ကို မျက်လုံးလေး တလက်လက်နဲ့ လှမ်းကြည့်တယ်။
“မေမေ… မေမေဆိုလိုချင်တာ သမီးကို ပြောပြပါဦး”
“ဒီလို သမီးရဲ့…. အချစ်ဆိုတာ မေမေ့လက်ခုပ်ထဲက သဲပွင့်လေးတွေနဲ့ အလားသဏ္ဍာန် တူတယ်၊ အချစ်ကို တမင် ခိုင်မြဲချင်လွန်းလို့ ဖိနှိပ်ဆုပ်ကိုင်ထားလေလေ ဆုံးရှူံးလွယ်လေလေပဲ၊ မတင်းမကျပ်လွန်းပဲ ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ သေသေခြာခြာ ယုယုယယ ဆုပ်ကိုင်ထားပါမှ လက်ခုပ်ထဲက သဲတွေလို သဏ္ဍာန်မပျက်ဘဲ ကိုယ်နဲ့အတူ ယှဉ်တွဲရှိနေမှာ၊ မဟုတ်လို့ကတော့ လက်ကြားထဲက ယိုစီးကျသွားတဲ့ သဲပွင့်လေးတွေလို ပြန်လည်မရရှိ နိုင်တော့ပဲ အချစ်ကို တစ်သက်စာ လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးရတတ်တယ်..”
မေမေ့ စကားအဆုံးမှာတော့ သမီးက မျက်လုံးလေးတွေ တဖျတ်ဖျတ်လက်လို့ ခေါင်းညိမ့်လျှက်က မေမေ့ ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်လိုက်တယ်။ တစ်ဘ၀စာ အကောင်းဆုံး ဥပမာကို မေမေဆီက သမီးရလိုက်ပြီလေ။
This entry was posted in အသိသစ်တံခါးချပ်များ. Bookmark the permalink.	← မြတ်ဆရာ
20 Responses to သဲနဲ့တူတဲ့အချစ်
စံပယ်ချို says:	June 23, 2012 at 2:52 pm	မတင်းမကျပ်လွန်းပဲ ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့
Reply	Junemoe says:	June 23, 2012 at 3:33 pm	အချစ်ကို ဘယ်လိုသဘောထား ကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာလေး… တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာသားလေးပဲ အမရေ။
အရမ်းသဘောကျတယ်.. ဟုတ်တယ်… နော် လည်း မှတ်ထားရမယ်…. ခင်မင်လေးစားလျက်
Reply	ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ) says:	June 23, 2012 at 7:17 pm	မိုက်တယ်ဗျာဆရာမ။
Reply	သိ င်္ဂါရ says:	June 23, 2012 at 9:49 pm	ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ သေသေချာချာ …
ဟုတ် … အဲလို လုပ်ကြည့်ဦးမယ် … Reply	မြသက်ခိုင် says:	June 28, 2012 at 3:22 am	မမရေးတဲ့စာသားတွေဖတ်လို့ရသရှိပါတယ်
Reply	ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) says:	June 24, 2012 at 12:48 am	မတင်းမကျပ်လွန်းပဲ ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ သေသေခြာခြာ ယုယုယယ ဆုပ်ကိုင်ထားဦးမှ Reply	angelhlaing says:	June 24, 2012 at 3:08 am	မှတ်သားလိုက်နာစရာလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မမ…ရေ။
Reply	ကူးကူးလှိုင် says:	June 24, 2012 at 9:18 am	မချောပြောသလိုပဲ အဲလိုလေး ဆုပ်ကိုင်ထားအုံးမှ…
Reply	သတိုး says:	June 24, 2012 at 10:00 am	“ခိုင်မြဲချင်လွန်းလို့ ဖိနှိပ်ဆုပ်ကိုင်ထားလေလေ ဆုံးရှူံးလွယ်လေလေပဲ …”
နေရာတိုင်း၊ အချိန်တိုင်းမှာ အမေ့ရဲ့ သာဓကလေးက အသုံးဝင်၊ တွင်ကျယ်နေတာပါ။ ခင်မင်သော သတိုး
Reply	သိင်္ဂါကျော် says:	June 24, 2012 at 3:13 pm	အရင်ကလည်း ဖတ်ဖူးပါတယ်..
အခုပြန်ဖတ်ရင်းနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း တစ်ခုတွေးမိသွားတယ်..
အဲဒီ သဲတွေကို တင်ထားတဲ့ လက်ခုပ်နှစ်ဖက်က ဟန်ချက်ညီညီ ယှဉ်ထားတဲ့ ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ လက်တွေ ဖြစ်မယ်ဆို နှစ်ယောက်လုံးက မတင်းမကျပ်လွန်း ယုယုယယ ဆုပ်ကိုင်ထားမှ တစ်သက်စာ ခိုင်မြဲနိုင်မှာလို့လေ..။ တစ်ယောက်ကသာ သူ့လက်ကို ဖြေချလိုက်မယ်ဆို တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်ဘူးလေ နော်..။
Reply	Latt Latt says:	June 25, 2012 at 4:33 pm	မတင်းမကျပ်လွန်းပဲ ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ သေသေခြာခြာ ယုယုယယ ဆုပ်ကိုင်ထားပါမှ ဆိုတဲ့ ချစ်ခြင်းရဲ့အနူးညံ့ဆုံးကိုင်တွယ်ပုံကိုသိသွားပါတယ်
Reply	အလင်းအိမ် says:	June 25, 2012 at 9:31 pm	အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ ဒဿနလေး တစ်ခုပါပဲ….
Reply	မိုးညချမ်း says:	June 26, 2012 at 10:15 am	ဗဟုသုတရဖွယ်ပါပဲ … လိုက်နာမှတ်သားပါ့မယ် …
Reply	မိုးစက်ပွင့် says:	June 26, 2012 at 3:45 pm	ကိုယ်တွေ့နဲ့ယှဉ်ပြီး အားပေး ထောက်ခံသွားပါတယ်ရှင်…….
Reply	ခနွဲ says:	June 26, 2012 at 6:48 pm	ဟုတ်ကဲ့…..လေ့လာသွားပါတယ်….
Reply	ညီလင်းသစ် says:	June 27, 2012 at 5:31 am	အချစ်အပေါ်မှာ လှလှပပ မြင်ထားတဲ့ အတွေးအခေါ်လေး ပါပဲ..၊ သဘောကျမိတယ် မမြသွေးနီ..၊
အဲဒီ အချစ်သဲမှုန်တွေ အပေါ်မှာ နားလည်မှု ရေစက်ကလေးတွေ ပက်ဖြန်းပြီး ခပ်ထိုင်းထိုင်း သံယောဇဉ် ‘ရွှံ့’ ဖြစ်သွားတော့မှပဲ လက်ခုပ်ထဲ အပြည့်ထည့်ထား တော့မယ်…။းP
Reply	နေခြည် says:	June 27, 2012 at 12:30 pm	အိုး…မမ သိပ်ကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးပဲနော်
အချစ်ကို တင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်မထားသင့်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပေါ့နော်
Reply	နေစိုး says:	June 27, 2012 at 10:52 pm	အဲဒီ ၀တ္ထုတိုလေး ကျနော့် အမျိုး သမီးကိုပေးဖတ်ချင်လိုက်တာဗျာ…….
Reply	မိုးအေး says:	June 28, 2012 at 2:09 am	ပြုပြင်ဖန်တီးလို့မရသလို မလှုပ်နိုင်အောင် ချုပ်နှောင်ထားလို့လည်းမရတဲ့ အရာပေါ့.
အဲဒီအချစ်သဲမှုန်တွေကို လက်ထဲမှာကြာရှည်တည်တံ့နိုင်အောင် ဘေးကနေ သံယောဇဉ်ဆိုတဲ့မေတ္တာရေစင်လေး ပက်ဖျန်းပေးမယ် ဆိုရင် တော့.. မူလ လက်ဟောင်း သဲမှုန်လေးလို လှလှပပ လေး မဟုတ်တောင် ပုံမပျက် ကျန်နေရစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ နော်…
Reply	Win Hlaing says:	July 16, 2012 at 7:37 pm	ကျွန်တော့် ကောင်မလေးက တင်းကျပ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အမ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> “နိုင်တဲ့အရှုံး” ၀တ္တုအပေါ် VOAမှ ဆရာမမေငြိမ်း၏ Review	Comment ပေးလို့မရဘူးဆိုရင်…	မိမိCommentပေးချင်တဲ့ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်လေးကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ။ ပို့စ်တစ်ပုဒ်လုံး ပေါ်လာပြီး အောက်ဆုံးမှာ Comment ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရန် အီးမေးလ်	myathwayyni@gmail.com
Mya Thway NiCreate Your Badge
ပို့စ်အသစ်မှန်သမျှဒီနေရာမှာ…	PEN Myanmar ဆိုတာ…
Happy Belated Blog Day !
အိတ်မှောက်သွန်ပစ် နှစ်ဆယ့်ရှစ် (Tag Post)
သူတို့အမြင် …ညီလင်းသစ် on PEN Myanmar ဆိုတာ…စံပယ်ချို on PEN Myanmar ဆိုတာ…ပစ်ပစ် on PEN Myanmar ဆိုတာ…ဟဲမင်းဝေ on အကြံဥာဏ်ပေးလိုလျှင်…Ye Khaung on သမီးရဲ့မျက်လုံးလေးအများဆုံးဖတ်တဲ့ပို့စ်အကျွမ်းတ၀င်ရှိသောသူစိမ်းများ - 23908 hitsသမီးရဲ့မျက်လုံးလေး - 22296 hitsအိမ်မက်ကောက်ကြောင်း - 19098 hitsလပ်ကီးနဲ့ မီးညောင် (၂) - 17852 hitsခိုးလိုးခုလုဖြစ်နေလို့ - 17555 hitsတစ်လချင်းစီ ရေးခဲ့တာတွေ…	Select Month November 2013 (1)
AMK Creation (4)
PEN Myanmar (1)
Save The Aged (43)
Teen Magazine (ဖူးငုံမဂ္ဂဇင်း) (32)
အက်ဆေး/ ရသစာတမ်း (10)
အိပ်မက်တို့ မြစ်ဖျားခံရာ (4)
အတွေ့လေးရယ်တဲ့မှ အို..အကြုံ (23)
တွေးမိတွေးရာ ရေးမိရေးရာ (33)
သူတို့ရောက်နေကြပါလား …	http://www.casinos-online.asia/th/
ပထမဆုံးပုံနှိပ်ဝတ္တု	Bloggersများ၏ ရသစာစုများစုစည်းမှု	အွန်လိုင်းရွှေဝတ္တုတိုဆု…	ရန်ကုန်ဘဆွေ…	" မီးဖိုပေါ်မှောက်ကျသွားတဲ့
တိုတောင်းတဲ့ လူ့ဘ၀နဲ့ ပိုဟပ်မိတယ်.. "
သူတို့လာလည်ကြတယ်…	Meta	Log in